Madaxweynaha Jubbaland oo ku baaqay in waxkasta wada hadal lagu dhameeyo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jubbaland oo ku baaqay in waxkasta wada hadal lagu dhameeyo
Madaxweynaha Jubbaland oo ku baaqay in waxkasta wada hadal lagu dhameeyo
Kismaayo (SONNA) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ayaa ku baaqay in Soomaalida ay isu muujiso qadarin iyo is ixtiraam, iyadoo la ilaalinayo danaha Ummadda.
Mudane Maxamed Axmed Islaam ayaa ugu horeyn faah faahin ka bixiyay socdaal uu dhawaan ku tegay Gobolka Gedo, halkaasi oo uu kula soo kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada, maamulka iyo saraakiisha ciidamada amniga oo ay ka wada hadleen sidii loo dar dargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab.
“Dhowr iyo toban bari ayaan safar ku jiray oo gobolka Gedo ah, intii aan maqnaa dagaallo badan ayaa dhacay, balse waxaa jiray diyaar garow fiican oo ay ciidamada isku tashanayeen oo ay cadowgooda meel fiican bey ka gaareen ciidamada, waxaana ay hadda ku jiraan abaabul inay sifeeyaan degmooyinka qaar ee gobolka ka mid ah”ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada ay door fiican ka qaadan doonaan sidii dib la isugu furi lahaa waddooyinka qaar ee gobollada Jubbooyinka ee ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
“Waxaa jira maalmahan wadanka Xaaladiisa waxaa mooddaa inay jiraan qilaafaad, iska bada hadal iyo is eed eed, Soomaaliya waxaan isleeyahay Nabad is afgarad iyo wadahadal ayaa wax lagu dhisi karaa, khilaaf wax buu dumiyaa mooyee, waxba ma dhiso, waxaana loo baahanyahay guud ahaan Soomaalida inay is ixtiraamto, heer gobol iyo heer Federaal intuba, isqadarin, is ixtiraam iyo wadatashi ayaa guul lagu gaari karaa” ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
“Dalkan waxa uu u baahanyahay in la wada tashado, dalkan waxa uu u baahanyahay is afgarad wixii soo baxa in lagu dhameeyo, waxaana diyaar u nahay inaan gogol dhigno Kismaayo oo ay isugu imaanayaan Madaxda dowlad goboleedyada oo looga hadlayo xaaladda dalka iyo wixii tabasho ah oo ay u qabaan Madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya”ayuu raaciyay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Previous articleMaamulada Galmudug iyo Puntland oo heshiis wada gaaray
Next articleWashington”weerar kuma nihin Kuuriyada Waqooyi”